Humni ittisa Itoophiyaa WBO adamsuuf daangaa cabsee Keeniyaa naannoo Sololoo seene - Walabu Media | Oromo News & Opinions
Home featured Humni ittisa Itoophiyaa WBO adamsuuf daangaa cabsee Keeniyaa naannoo Sololoo seene
Kuni kan ta'e yeroo torbee tokko hincaalle keessatti si'a lammataatiif
Torbee tokko dura raayyaan humna ittisa Itoophiyaa daangaa Keeniyaa cabsee seenuun isaa niyaadatama. Ammas filannoon biyyattii raawwatee guyyaa muraasa booda si’a lammaffaaf daangaa biyya ollaa cabsuun isaanii gabaafameera. Amma garuu kaayyoon woraanni Itoophiyaa irra deddeebi’aa daangaa Keeniyaa cabsuuf ifa ta’eera: Woraana Bilisummaa Oromoo (WBO) adamsuudha.
Woraanni kuni naanno Sololootti poolisoota naannoo hidhannoo hiikkachiisuun alatti jiraattotas doorsisaafi sodaachisaa akka ture gabaafameera. Akka gabaasa gamasii bayutti, woranni mootummaa Itoophiyaa jiraattota Sololootiin ‘bakka WOBn jiru nutti argisiisaa,’ jedhaa turan.
Humni woraana kanaa 30 ol yoo ta’u hidhannoo adda addaa, Kilaashii irraa hanga meeshaa gurguddaatti, kan hidhate ta’uun isaas gabaafameera.
Previous articleBaqattoonni Itoophiyaa 250 mana hidhaa Tanzaaniyaa keessatti dararamaa jiru
Next articleUS Department of State: Ethiopia’s May 24 Parliamentary and Regional Elections